आफ्ने परिवार का’ल बन्यो सुजिताको जिन्दगीमा : १ वर्ष अघि देखि बनाएका थिए मा’र्ने यो’जना! – PathivaraOnline
Home > समाचार > आफ्ने परिवार का’ल बन्यो सुजिताको जिन्दगीमा : १ वर्ष अघि देखि बनाएका थिए मा’र्ने यो’जना!
admin July 5, 2021 समाचार	0
एजेन्सी । महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–७ भ्रमरपुरा गाउँमा ह ‘त्या गरी गा डि एको अवस्थामा एक महिलाको श व फे ला परेको छ। परिवारजनले गत जेठ २० गते बिहान घरबाट ह राएको भनिएको स्थानीय मुकेश ठाकुरकी पत्नी सुजिता ठाकुरको श व ह ‘त्या गरी गा डि एको अवस्थामा आज फे ला परेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यका अनुसार भ्रमरपुरा गाउँको मनरहीया वनमा रहेको पतिराम ठाकुर (मृ तकका ससुरा) को खेतमा गा डि एको अवस्थामा श वका अ व शे ष फे ला परेका हुन्।
गत १९ गते राति नै ह ‘त्या गरी ससुरा पतिराम, देवर रुपेश र पति मुकेशले उनको श व घरभन्दा करीब ३ किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा रहेको मनरहिया वन नजिकको खेतको पश्चिम उत्तर कु नामा गा डि एको प्रहरीले जनाएको छ। आज २५ दिनपछि सुजिताको श वका अ व शे षहरू फे ला परेको हो।
गोठ छेउको टहरोमा सुतेका बुढाबुढीकाे यस्तो बेहाल…
मुलपानीमा शनिवार राती कारीब ३ बजे भएको सवारी दुर्घ,टनामा श्रीमान श्रीमतीको सुतेकै अवस्थामा मृ,त्यु भएको छ । सडकबाट बा ५ ख २५११ नम्बरको टिपर अनियन्त्रित भई पल्टि,एर अन्दाजी ५० मिटर तलको टहरोमाथि ख,स्दा उक्त दुर्घ,टना भएको हो ।
समयमै उप’चार नपाउदा दुबै हा’त गुमा’ईन बिचरी अल्पनाले!
गरिबको गहुँ बाली न’ष्ट गरेर मेला लगाउँदै मन्त्री प्रभु शाह, भ’क्कानिदै रोए गरिबहरू… (भिडियो)